Home Wararka Ciidamadii Muqadishu laga keenay aya laga yaabaa in dib loo celiyo. Gud....
Ciidamadii Muqadishu laga keenay aya laga yaabaa in dib loo celiyo. Gud. Mursal muxuu ku badashay?
Wararka caawa ka imaanaya Magaalada Baydhabo ayaa shegayo in ay laga yaabo in Ciidamadii dhawaan la geeyay magaalada Baydhabo in dib loogu ciliyo magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Mudane Mohamed Mursal Sheekh Abdiraxamaan ayaa u muuqda mid ka dhaga adeegay fulintii qorshahii RW Kheyre watay.
Hadii arintaan run noqoto ayaa dad badan waxa ay iswaydiinayaa Gudoomiye Mursal oo lagu yaqaano dafiicnimo iyo u nuglaanshaga Laaluusha maxa uu uga badashay Kheyre?
Wixii arintaan ku soo kordha gadaal ayaan idinkaga soo sheegi doonaa.
Previous articleQarax caawa ka dhacay Magaalada Baydhabo iyo waxyeelo kasoo gaartay Ex-Xildhibaan Macalin Nuur Xasan Ibraahim
Next articleFaragelinta uu MW Farmaajo ku hayo maamulka KG waa gardarro
Taliska ciidamada Mareykanka ee AFRICOM oo sheegay inuu kordhin doono duqeymaha...
Al Shabaab oo xalay weerar ku qaaday saldhig ku yaalo magaaladda...